कक्षा १२ को प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुभन्दा १३ घन्टाअघि नै बाहिरिएको गम्भीर खुलासा – Online Nepal
November 29, 2020 106
काठमाडौं । कोरोना संकटबीच सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षामा डरलाग्दो तरिकाले अनियमितता भएको पाइएको छ । केहि दिन पहिले सामाजिक सञ्जालमा मोबाइलमा हेर्दै लेखेको भिडियो एकदम भाइरल भइरहेको थियो । यो बीचमा अहिले थप नयाँ खुलासा भएको छ ।
९ मंसिरदेखि जारी कक्षा–१२ को परीक्षाअन्तर्गत ११ मंसिरको फिजिक्सको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुभन्दा १३ घन्टाअघि नै बाहिरिएको खुलेको छ । बुटवलका एक शिक्षकका अनुसार फिजिक्सको प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुभन्दा १३ घन्टाअघि नै बाहिरिएर विद्यार्थीहरुको फेसबुक ग्रुपमा आइसकेको थियो ।
आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको खबर अनुसार, ‘बुटवलमा अघिल्लो साँझ ७ बजे केही ब्यक्तिमाझ प्रश्नपत्र पुगेको थियो । भोलिपल्ट पेपर पाएपछि शिक्षकहरुले सामाजिक संजालमा आएको र परीक्षाका लागि मेलमा पठाएको पेपर एकै भएको देखेपछि तत्काल पनिकालाई जानकारी गराएका थिए ।,,,भिडियो हेर्त्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
परीक्षा बोर्डका अधिकारीले गल्ती स्वीकार नगरी उल्टै शिक्षकलाई प्रहरी लगाएर समात्ने धम्की दिएपछि कुरा सेलायो ।’ यसबारेमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिब, परीक्षा उपनियन्त्रक र प्रदेश परीक्षा कार्यालय प्रमुख पूर्ण जानकार रहेको उनी बताउँछन् ।
Prevभारतका नेपाली सीमामा चाइनीजका कोठी देखि पसल, भाषा कक्षासम्म, भारत टाट पल्टिदै !
Nextश्रीमती माइतीमा बसेको झोकमा एक श्रीमानले जे गरे, त्यसले सबैको होस उडायो !
२५०० भाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले कोठाबाट भाँडाकुँडा फाल्दै घरबाट निकालिदिए, सडकमा धरधरी रुँदै (भिडियोसहित)